‘लज्जा’ उपन्यास मैले धरै वर्षअघि पढेको थिएँ । त्यसपछि अरु पनि केही पढियो र लेखिकाको नाम घोकियो तसलिमा नसरिन । तसलिमाको नाम तसल्लीका साथ लिन मिल्दैनथ्यो, किनभने यो नामसँगै उनको विद्रोह पनि गासिएर आउँथ्यो । कतिले उनको विद्रोहलाई होइन यौन पक्षलाई बढी प्रधानता दिन्थे र भन्थे– यो त निकै ‘छिल्लिएर’ लेख्छे, आइमाई होइन र ? यो त्यही कुरा थियो जुन नयाँ सोच्ने पुरुष लेखकलाई ‘अराजक’ र महिला लेखिकालाई ‘छिल्लिने’ भनेर भनिन्थ्यो/भनिन्छ । अँध्यारो दिमागलाई उजिल्याउन झ्याल खोलेर प्रकाशलाई भित्र्याउँदै मात्र के थिएँ कि अप्ठेरो पार्ने गरीको फोन आयो । फोन उही विद्रोही लेखिकासँग भेट्नेबारेको जानकारीसहित थियो । त्यसपछि निकै अल्छीपनाका साथ मैले कोठा छोडेँ । तर जति अल्छी गरेको थिएँ त्यो भन्दा निकै फुर्तिका साथ न्यानो माया दिन कार्यक्रम आयोजक प्रमिला रिजाल अग्रसर देखिनुभयो । ‘साउथ एसियन उमन डेभलपमेन्ट फोरम’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तसलिमा मन्तव्य राख्न आएकी थिइन । विद्रोही लेखिकाको गहन पाठक मेरा मित्र वासुदेव पौडेल मसँगै थिए, जसले मलाई अन्तिमसम्म साथ दिए । अन्तरवार्ता लिनु सजिलो थिएन । त्यो पनि म जस्तो सामान्य कथित पत्रकारले । विद्रोही लेखिकाको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । हामीले त्यसलाई पार गर्नु ठूलो कुरा थिएन । ठूलो कुरा त विद्रोही लेखिकाले दिएको समयमा नै विद्रोह गर्ने हो कि भन्ने थियो । आखिर त्यही भयो । उनले अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिने आफ्नो नीति नरहेको सूचना हामीसम्म आइपुग्यो । जब कि हामीलाई तोकिएको समयसम्म त्यसबारे केही थाहा थिएन । म जसरी भए पनि एक पटक उनैसँग कुरा गरेर मात्र घर फर्किने सोचमा दृढ थिएँ । पछि धन्न उनले हामीलाई बोलाइन् । हामीसँगै रहेकी फोटो पत्रकार विजु महर्जनसहित हामीले झण्डै तीन घण्टा कुरेर अन्तरवार्ता लियौँ । अन्तरवार्ता दिन हाम्रै अगाडि बसेकी ५५ वर्षीय तसलिमा निकै मधुरो र मीठो स्वरमा हाम्रा प्रश्नहरुको जवाफ दिन तयारी थिइन् । अन्तरवार्ता लिने ठाउँसम्म मसिनो स्वरमा सङ्गीत बजिरहेको थियो । तर जीवनको लयबद्ध सङ्गीतमा आफन्त र समाज छोडी २५ वर्ष निर्वासित जीवन बिताउनु पक्कै पनि सहज होइन । उनी पेसाले चिकित्सक हुन् । चिकित्सक पेसामै हुन्थिन् त सायद उनी हुन्थिन् बङ्गलादेशमै । जुन उनको आफ्नो मातृभूमि हो । तर आफूले देखेको, भोगेको कुरालाई शब्दमा उतार्ने बानीले उनलाई तानी ल्यायो लेखनमा । लेखक भएर बाँच्न कति गारो छ, त्यसको जिउँदो उदाहरण हुन् तसलिमा । किनभने त्यही लेखनले उनलाई जन्मभूमिबाट बेदखल गरायो । तर भन्छिन्– म अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुँ । राजनीतिक सीमाले मान्छेलाई बाध्ने परम्परा ठीक होइन । आशा गरौँ उनले सोचेको अन्तराष्ट्रियतावाद हाम्रै जीवनकालमा भोग्न पाइनेछ । उनै लेखिका जसले झण्डै साढे तीन दशक लेखनमा र महिलाको अधिकारका पक्षमा खर्च गरिन्, उनले नै महिलालाई कसरी हेर्छिन् भन्ने जान्न चाहनु मेरा लागि रुचिपूर्ण थियो ।
प्रचण्डजीको भविष्यको चिन्ता लागिरहेको छ : नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता (भिडियो)